Sawiro Lix Weerar Oo Lagu Dilay Saraakiil Iyo Askar Fara Badan. – Bogga Calamada.com
Sawiro Lix Weerar Oo Lagu Dilay Saraakiil Iyo Askar Fara Badan.
December 27, 2017 5:14 am Views: 491
Wararka ka imaanaya dalka Maali waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay dhowr weerar oo geystay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed ay ka dhaceen deegaano ka tirsan dalkaasi.
Weerarka Kowaad oo loo adeegsaday qarax xoogan waxa uu ka dhacay deegaan dhaca xad beenaadka u dhaxeeya dalalka Maali Iyo Burkino Faso kaasi oo lala beegsaday ciidamada dowlada Burkino Farso.
Qaraxan waxa uu sigaar ah u haleelay gaari nooca ciidanka xambaara ah oo ay la socdeen askar fara badan oo ka tirsan dowlada Burkino Faso,waxa uu qaraxan sababay burburka gaariga uu haleelay iyo tiro dhowr askari ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqotay qaraxaasi.
Weerarka Labaad oo ahaa mid dhabba gal ah waxaa loo dhigay kolanyo ka tirsan maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka Maali waxeyna kolanyada la weeraray ka koobneed Shan gaari oo noocyada dagaalka ah.
Kamiinkan ayaa sigaar ah kaga dhacay agagaarka deegaanka Naara ee gobalka Kulikoro ee galbeedka dalka Maali,waxyeelo xoogan ayaana la gaarsiiyay Labo gaari oo ka mid aheed kolanyada Kamiinka loo dhigay sidoo kale tobaneeyo ka tirsan maleeshiyaatka Ridada Maali ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kamiinkaasi.
Weerarka Saddex-aad oo loo adeegsaday Qarax Miino waxaa lala beegsaday kolanyo ka kooban maleeshiyaatka daba dhilifka Maali iyo ciidamada Afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalkaasi.
Qaraxan waxa uu sigaar ah kaga dhacay meel u dhaw deegaanka Dallah oo ka tirsan Wilaayada Mobti waxeyna Miinada burburisay gaari Tiniko ah askartii la socotayna dhimasho iyo dhaawac ayeey ku noqdeen qaraxaasi.
Weerarka Afaraad oo isagana ahaa Kamiin waxaa loo dhigay kolanyo ka tirsan maleeshiyaatka Maali gaar ahaan kuwa loo yaqaana Jeyshu Saaxil oo ah maleeshiyaat ay sigaar ah u tababartay dowlada Saliibiyadda Faransiiska.
Kamiinkan waxaa lagu dilay Labo askari oo ka tirsan maleeshiyaatka Maali tiro kalane waa lagu dhaawacay weerarkaasi dhabba galka ah.
Weerarka Shanaad oo isagana loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso waxa uu sigaar ah kaga dhacay gudaha magaalada Keydaal oo xarun u ah Wilaayada Keydaal ee dhacda dhanka Waqooyi ee dalka Maali.
Miinada ayaa burburisay gaari gaashaaman askartii la socotay oo ahaa kuwa duulaanka ku jooga dalkaasina dhaawacyo ayeey ku noqdeen qaraxaasi.
Weerarka Lixaad oo sigu jiray Labo weerar oo xiriir ah waxaa lagu qaaday Saldhigyo ciidamada dowlada Maali gaar ahaan kuwa Xuduudaha Ilaaliya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobalka Ségou ee bartamaha dalka Maali.
Labadan weerar waxaa lagu dilay askar fara badan oo kuwa xuduudaha ilalaiya ah sidoo kale waxaa lagu burburiyay hal gaaari oo Tikniko ah,waxeyna ragga weerarka qaaday oo la wareegay gacan ku heynta Labada saldhig soo furteen Mooto iyo keyd hub ah oo isugu jira Hubka culus midka fudud iyo sanaadiiq rasaas ah.
Mas’uuliyadda Lixdaan weerar ee ka wada dhacay gudaha Maali iyo Xaduud beenaadka uu dalka Maali la wadaaga dalka Burkino Faso waxaa sheegtay Jamaacada U Gargaaridda Islaamka iyo Muslimiinta ee ka dagaalanta dalka Maali oo ah Mujaahidiin taabacsan Mujaahidiinta Al-qaacidah ee dhulka Bilaadul Magribil Islam.
Mu’asasada Az-zallaaqah ee garabka Warbaahineed ee Mujaahidiinta Maali ayaa baahisay sawirka gaari Gaashaaman oo laga gubay ciidamada Xukuumada Burkino Faso waxeyna Mu’asasadu xaqiijisay in weerarka lala beegsaday ciidamada Burkino Faso uu Jawaab celin u ahaa Lix ruux Shacab Muslimiin ah oo ciidamada Burkino Faaso ku dileen deegaan ka tirsan dalka Burkino Faso gaar ahaan dhanaca Xadbeenaadka uu la wadaago dalka Maali.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirada Gaariga Laga Gubay Burkino Faso.